TuxPuck: Shufflepuck Cafe Clone | Laga soo bilaabo Linux
Runtii ma aqaan waxa ciyaartan loogu yeero nolosha dhabta ah (hadda waan ciyaaray, muddo). Waxay u egtahay Jockey, laakiin miis hawo afuufaya si jibladu ugu socoto xawaare jaban .. Haa, waxaan qiyaasayaa inaad horayba u ogayd waxay tahay.
Hagaag, meelaha keydka Arch waxaad ka heli doontaa ciyaar la mid ah tan loo yaqaan TuxPuck, meesha aan ku leenahay ka soo horjeed ahaan Tux y Arcana. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad rakibto oo aad siiso dardaarankaaga .. ii sheeg yaa garaaci kara labadan shaqsi. Waan quustey, waa inaad leedahay jawaab celin duuliye dagaal.
Ciyaartu ma laha xulashooyin horumarsan ama wax la mid ah. Kaliya waxaan la dhaqaaqeynaa tilmaamaha si aan uga hortagno in calaamaddu gaarto yoolkeenna? Si aad u rakibto horay ayaad u ogtahay:
Iyo kiiska Debian:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » TuxPuck: Shufflepuck Cafe Clone
Kumaa naqshadeyn doona haweeneyda xiisaha badan. Naasahaas waaweyn ee tilmaamaya. Waxaan doonayaa inaan kala soo baxo si aan si dhow ugu fiirsado
Jawaab si aad u dirto
yum rakibi tuxpuck
In kde waxaa lagu keydiyaa ciyaaraha arcade
Wuxuu leeyahay laab badan laakiin wajiga ayaa laga nixaa XD
Waa run iyadu waxay leedahay naaso, laakiin wejigu wuxuu dilayaa xamaasad oo dhan, waa inaan sameeyaa qaabka ciyaarta oo aan galiyaa kartoon karto xD
Waxaan u aqaanaa "Xeegada Hawada." Sida fiican. Waxaan ku qarash gareeyay lacag fiican sanado ka hor kulamadaas. Ma aanan ogeyn inay leedahay nooc Linux ah.
Waxay umuuqataa mid wanaagsan, halkan waxaan ugu yeernaa Tejo, in kasta oo Tejo sidoo kale loogu yeero wax lagu ciyaaro xeebta, oo la mid ah bocce.
Ku jawaab Colga1
Talo bixin wanaagsan, in kastoo aan kuu soo jeedinayo inaad si taxaddar leh u adeegsato, maaddaama Isku Tuuji GNOME 2 waxay gelineysaa INTERFACE oo DHAMMAAN baakado aan loo baahnayn umana oggolaanin inaan iska indhatiro baakadaha (sidaa darteed waxaan u istcmaalaa kaliya apt-get).
Waad ku mahadsantahay wanaag meesha aan ku noolahay, ciyaartaas wali way jirtaa.
Ku ilaali xogtaada EncFS